Hoy ny mpamahambolongana Amerikana momba ny fangalaran-jaza kamboty Haisiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2010 20:07 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, 繁體中文, 简体中文, polski, Español, English
Raha eo andalam-panarenana sy fanorenana i Haiti, dia misy indray ny fanahiana ny mikasika ny kilonga indrindra moa fa ny kamboty. Efa maro ny tatitra momba fitadiavan'ireo mpanondran-jaza mitady kilonga marefo fiarovana, ary anisan'izany ity vaovao navoakan'ny CNN ity.
Misy fifandraisana betsaka amin'i Etazonia ny momba ny kamboty satria Amerikana ireo anaty vondrom-piangonana nosamborina fa maro tamin'ireo kamboty ireo no nalefa tany Etazonia raha nitohy ny fananganan-jaza. Misaratsaraka be ihany ny hevitra momba ny misionera any amin'ny tontolom-bolongana Amerikana (US), ary dia mampanontany ihany koa ny fihetsiky ny departemantam-panjakana Amerikana.
Ao amin'ny bolongana momba ny lalàna Right Juris, no anontanian'ny mpamaham-bolongana Ryan izay fepetra raisin'ny Departemantam-panjakana amin'izao toe-draharaha izao. Rehefa hita manko fa mbola velon-dray aman-dreny ny “kamboty” 22 amin'ny 33 izay nokasain'ny misionera hapetraka any amin'ny akany fitaizana kamboty iray any amin'ny Repoblika Dominikana, ary tsy manana antotan-taratasy sy alalana hamoaka ireo kilonga ireo hivoaka ny fireneny ny vondrona; dia nanapa-kevitra ny “tsy hiditra an-tsehatra” ny Departemantam-panjakana.
“Tsy maninona izay hanjo ny misionera Amerikana voampanga ho nangala-jaza kamboty haisiana izay mbola haharitra any Haiti mandritra ny fotoana maharitra. Mbola ho tavela any fotoana maharitra kokoa izy ireo raha tsy miezaka ny hamonjy azy ireo na hanala azy ireo any Departemantam-panjakana, na hamindra ny raharaha any Etazonia. Ny fanontaniana manko izao dia hoe tokony hiditra an-tsehatra ve ny Departemantam-panjakana? Ahoana ny eritreritrao? Tokony hotsaraina ary hampangaina ho nangala-jaza ve ity vondrona ity? Tokony hanao fanerena ve fitondram-panjakana Amerikana hanafaka azy ireo? Tena nanana fikasana tsara tao anatiny tokoa ve ireto vondrona ireto raha nihevitra ny hampandositra zaza Haisiana 33? Tiako tokoa ny hihaino ny hevitrareo.”
Niteraka fisalasalana ny fahasahisahiana tafahoatra nataon'ireto misionera nanao izay nataony izay, tsy nitady fahazoan-dalana na tany Etazonia na tany Haiti.
Paul Shepard ao amin'ny bolongana Black Spin no niteny fa ho sarotra ny lalana hizoran'ireto misionera ireto.
“Raha mety ho marina eo amin'ny fony ry zareo, tsy tao mihitsy kosa ny lohany raha mihevitra hanao izao zava-tsarotra mampidi- doza izao nefa tsy nampilaza ny fitondram-panjakana na tany Etazonia na tany Haiti amin'izay ataony.
Tsy misy ny misalasala amin'ny hoe tsaratsara kokoa raha afindra amina fianakaviana any amin'ny firenen-kafa vonon-kandray amim-pitiavana ny sasany amin'ireo kamboty any Haiti ankehitriny, saingy mila fotoana maharitra sy fiaraha-miasa amin'ny mpitondra ao an-toerana ny fanaovana ezaka tahaka izao.”
Manontany ny momba ny ezaka famonjena ny kilonga any Haiti i Te-Ping Chen ao amin'ny Change.org. Ao amin'ny lohateny mihantsy manao hoe “Rehefa mamono kilonga ny ‘Famindram- po’ any Haiti”, no mamakafaka ny fiantraikan'ny “fisamborana” ny misionera amin'ireo izay nikasa hanolo-tena hanao asam-pamonjena any Haiti i Chen.
“…Hatramin'ny nisamborana ireo misionera tamin'ny volana lasa teo dia nampiraviray tanana ny dokotera, mpamonjy voina ary mpiasam-panjakana (izay fantatrareo fa manan-jò hanao asam-pamonjena an'i Haiti) niezaka hanavotra ny ain'ireo zaza Haisiana maratra mafy ny vitan-dratsy nahazo an-dry Laura Silsby sy ny tariny.
Mitatitra ny New York Times amin'izao fotoana izao fa kilonga 10 no maty na niharatsy dia ratsy ny toe-pahasalamany miandry ny fahazoan-dalana avy amin'ny manampahefana lasa mailo dia mailo amin'ny famoahana azy ireo ivelan'ny fireneny hotsaboina.
Nialoha ny nisamborana ireo Amerikana ireo dia teo ho eo amin'ny 15 isan'andro teo ny kilonga Haisiana naratra no nalefa hotsaboina tany Etazonia tamin'ny alalan'ny fiaramanidina (zotra mahazatra). Rehefa niditra an-tsehatra kosa ry Silsby sy ny tariny dia zaza telo ihany no nalefa hotsaboina maika nalefa tamin'ny fiaramanidina an'olo-tsotra….”
Anisan'ireo manontany, tahaka ireo olona fanta-daza, i Chen raha asam- panaovantsoa izany manaisotra ny kilonga Haisiana amin'ny fireneny izany hitadiavana fiainana tsaratsara kokoa. Henjana ny tsikera nataon'ny mpanao matoandahatsoratry ny Washington Post Eugene Robinson tamin'ny misionera tamin'ny fahasahisahiam-poana raha nilaza fa “Ny tena fitiavana dia ny fanampiana ireo fianakaviana hahakarakara ny zanany — fa tsy ny hampiditra azy ireo any anaty bus ka hitondra mandositra azy ireo [ny zanany]. “
Marc Herman moa tamin'ny lahatsoratra nataony tato amin'ny Global Voices dia nanamarika fa nahatalanjona ny fanginan'ny Haisiana momba ny raharahan'ireto kamboty ireto. Nasongadiny ihany koa fa niroborobo tampoka ny fijerena ny momba ireto kilonga Haisiana ireto taorian'ny horohorontany.
Tamin'ny takarivan'ny alarobia teo moa ny mpitsara Haisiana iray no namoaka didim-pitsarana fa ho afahana eo noho eo ny 8 amin'ireo misionera 10 . Nandray ny fiaramanidina hizotra ho any Etazonia avy hatrany moa ry zareo ka nandao an'i Laura Silsby sy i Charisa Coulter. Sisby moa no mpitarika ireto vondrona ireto.
Mbola hamaivay indray ny hevitry ny olona ao amin'ny tontolom-bolongana izay efa misaran-kevitra be ihany amin'izao famotsorana tampoka ireo misionera 8 ireo. Ho lasa indray ny adihevitra amin'ny hoe fa maninona moa no mbola tazonina indray ireo misionera 2 Laura Silsby sy Charisa Coulter, ankoatra ny fanazavana ofisialy nilazan'ny mpitsara fa te-hamotopototra lalina amin'izay antony nahatongavan'izy roa tany Haiti nialoha ny horohorontany nandravarava tamin'ny volana lasa iny. Tarataratra fa mbola hitodihan'ny besinimaro indray ny kilongan'i Haiti.
Tafiditra anisan'ny takelaka manokan'ny Global Voices momba ny horohorontany 2010 tany Haiti ity lahatsoratra ity